‘सबैको घर उज्यालो बनाउन खट्ने भोला आफ्नै घर अध्यारो बनाएर अस्ताए’ | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
Home Breaking News ‘सबैको घर उज्यालो बनाउन खट्ने भोला आफ्नै घर अध्यारो बनाएर अस्ताए’
‘सबैको घर उज्यालो बनाउन खट्ने भोला आफ्नै घर अध्यारो बनाएर अस्ताए’
भदौं ३० गते । हाम्रो घरमा एकछिन विजुली नआउँदा हामी विद्युतका कर्मचारीलाई गाली गछौं । किन विजुली नदेको ? कहाँ गए विद्युतका कर्मचारी ? काम छैन विद्युत अफिसको ….. यस्तै यस्तै शब्दावलीहरु प्रयोग गर्दछौं । तर विद्युत अफिसमा काम गर्ने प्राविधिकहरु रातदिन नभनी विद्युत मर्मतमा जुटेका हुन्छन् । के झरीबादल, के भोकतिर्खा, के निद्रा नभनी कार्यक्षेत्रमा खटेका हुन्छन् विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा प्राविधिकहरु खाँदाखादैको थालको भात नै छाडेर पनि सेवा सुचारु गर्न जुट्छन् । यस्ता कुराहरु हामीलाई थाहा हुँदैन अनि हामी विद्युतका कर्मचारीहरुलाई गाली गर्दछौं ।
सीमित साधनस्रोत र जनशक्तिका वावजुद पनि विद्युतका कर्मचारीहरु सेवाग्राहीका घरहरु उज्यालो बनाउन रातदिन खटेका हुन्छन् । यस्तै रातदिन, भोकतिर्खा नभनी कार्यक्षेत्रमा खट्ने एक होनाहार विद्युतका प्राविधिक भोला शर्माको सोमबार विद्युत लाइन मर्मतकै क्रममा पोलबाट खसेर ज्यान गयो ।
जलजला गाउँपालिका ७ मिलनचोक निवासी शर्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुश्मा वितरण शाखामा कार्यरत थिए । कुस्मा र आसपासका क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको विद्युत सेवा बनाउन सोमबार दिनभर कार्यक्षेत्रमा खटेका थिए । सवै तिर विद्युत सेवा सुचारु गरेर साँझपख कार्यालयमा आएको केही मिनेटमै अर्को एक स्थानमा विद्युत लाइन सुचारु नभएको फोन आउँछ ।
उनी लाइन मर्मतका लागि साथीहरुलाई भन्छन् । तर रात परिसकेकाले भोली विहान जाउँला भन्ने सहकर्मीहरुको भनाईलाई उनले भो अहिले नै जाउ,ँ बत्ति बाल्यौं भने पो बल्ल रामो सँग निद्रा लाग्ला ! भन्छन ।
सहकर्मी सहित शर्मा कुस्मा नगरपालिका ७ खरेहामा पुग्छन् । खरेहामा रहेको ट्रान्समिटरमा विद्युत सप्लाई नभएपछि उनी त्यहाँ स्थित एक पोलमा लाइन परिक्षण गर्न चढ्छन् । विद्युत पोलमा विद्युत परिक्षण गर्दै गर्दा एक्कासी विद्युतको झट्का लागेर पोलबाट खसेका शर्माको तत्कालै मृत्यु हुन्छ । हो यस्तै जोखिमपूर्ण काम गरेर नै हाम्रो घर उज्यालो भएको हो ।
सवैका घरहरु उज्यालो बनाउने शर्मा आफ्नै घर सदाका लागि अध्यारो पारेर सोमबार साँझ अस्ताए । उनको दुःखद निधन भयो । उनको निधनले जलजला शोकमा ढुबेको छ ।
इमान्दार र मिलनसारको पहिचान बनाएका ४२ वर्षीय स्वर्गीय शर्मा विद्युत प्राधिकरणको सेवामा कार्यरत भएको करिब २५ वर्ष भएको थियो । २५ वर्ष सेवा अवधिमा शर्मा कार्यालयले खटाएको जिम्मेवारी निकै कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने गरेको शर्माका सहकर्मी जिवन मल्लले बताउँनुहुन्छ । कतै विजुली बलेन भने शर्मा तत्काल स्थलमा पुग्ने गर्नुहुन्थ्यो मल्लले भन्नुभयो ।
विद्युत कार्यालयले एक इमान्दार र कुशल कर्मचारी गुमाएको छ उहाँले भन्नुभयो । कार्यालयलाई ठूलो क्षति हुनपुगेको छ अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन कालिगण्डकी घाटमा आउनुभएका मल्लले भन्नुभयो,‘स्वर्गीय शर्माले विद्युत सेवामा पु¥याएको योगदान अविस्मरणीय छ ।’ स्वर्गीय शर्मालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन कालिगण्डकी नदीमा भेला भएका सवैजनाको आँखामा आशु देखिन्थ्यो । सवै स्तब्ध बनेका थिए ।
शर्माको मंगलबार मिलनचोक स्थित कालिगण्डकी नदी किनारमा अत्यष्टी गरिएको छ । स्वर्गीय शर्माप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल,पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी,जलजला गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरु,पर्वत,बागलुङ र म्याग्दी विद्युत कार्यालयका प्रमुख एवम् कर्मचारीहरु र जलजलावासीहरु उपस्थित थिए ।
स्वर्गीय शर्माका पत्नी र दुई छोराहरु छन् । स्वर्गीय शर्माप्रति हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! हार्दिक श्रद्धाञ्जली !!